Soo koobid Cimilada sanadka 2017 | Saadaasha Shabakadda
Soo koobid Cimilada sanadka 2017
Sannadkii hore ee 2017-ka ayaa dhammaanaya waxaanan samayn doonnaa dheelitirnaan saadaasha hawada oo innaga tagtay. Laga soo bilaabo barafka ku dhaca xeebta Levante, ilaa heerkulka ku dhow 40 darajo xilliga qaboobaha, waa tan oo kooban 2017.
Ma rabtaa inaad aragto dhacdooyinka cimilada ee sannadkan?
1 Soo koobida sanadka
2 Kulayl badan iyo roob yar
3 Abaartii ugu xumeyd taariikhda
Soo koobida sanadka
Inta lagu jiro 2017, heerkul aan caadi ahayn oo ku dhow 40 darajo dhammaadka xilliga qaboobaha ayaa la duubay. Dhinaca kale, baraf ku dhaca meelo aan caadi ahayn sida xeebta Levante. Duufaantii ugu horreysay ee la siiyay magac sax ah, Ana, ayaa iyaduna dhacday, sidaa darteed, tani waxay ahayd sannad waxoogaa ka yara duwan inta kale oo cilladaha aan caadiga ahayn loo aanayn karo saamaynta isbeddelka cimilada.
Bishii Janaayo 2017 waxaay aheyd baraf heerka badda ah, wax aan 30 sano lagu arag magaalooyinka sida Torrevieja, Denia, Jávea ama Malaga. Duufaantaan oo ahayd mid xoog badan ayaa waxay sababtay inay soo dhacdo in ka badan labaatan munaaradood oo danab sare ah, taasoo keentay inay kumanaan dad ah koronto la'aan noqdaan Intaas waxaa sii dheer, daraasiin darawallo ah ayaa ku xanibnaa waddooyinka iyo dad badan oo tareen ah oo safra.
Bishii Febraayo waxay ahayd mid kamid ah bilaha ugu roobka badnaa sanadka, kaasoo ay roobabku gaadheen heerar 36% ka badan celceliska caadiga ah, hoos udhaca in ka badan 150 litir halkii mitir laba jibbaaran Malaga iyo kudhowaad 200 litir oo ah dhibco koonfur-galbeed.
Waxaa jiray dhacdooyin dhowr ah oo dabayl xoog leh, roob iyo baraf wata mowjado xoog leh oo ay dabayluhu dhaafaayeen 100 kiilomitir saacaddiiba, taasoo ka dhigaysa in ka badan 11 dhaawacyo ka soo gaadhay saqafyada dhaadheer iyo shilalka taraafikada.
Kulayl badan iyo roob yar
Bishii Maarso waxay ahayd mid aad u kulul, iyada oo la diiwaangelinayo heerkul aad u sarreeya xilligii aan ku jirnay. Diiwaanno dhowr ah ayaa la jabiyay waxayna ahayd mid kale oo ka mid ah bilaha sannadka markay roob da'ayeen si ka badan sidii caadiga ahayd. Xitaa Alicante iyo Barcelona wuu gaarayjecel lix jeer ka badan intii caadiga ahayd hal maalin gudaheed.
Bishii Abriil waxaan la kulannay biyo-mareen ballaadhan oo geedaha soo dumiyay, nalalka waddooyinka iyo alaabta guriga ee Menorca waxaana lagu dhawaaqay abaarta dhici doonta sannadka intiisa kale.
Maajo waxay ahayd sanad aad u kulul, oo leh diiwaanno badan oo heer kul ah, Taabatay 38 darajo oo Ourense ah ama 37 Granada ah.
In kasta oo aysan iyagu ahayn arrimaha saadaasha hawada, ma soo koobi karno sannadka iyadoo aan la magacaabin dabka ka dhacay Doñana. Waxay kacday intii lagu gudajiray kulaylkii ugu horreeyay ee dhacay bishii Juun, iyadoo ugu kululayd qarniga oo dhan. Dhibaatooyinka ugu xun ee deegaanka ayaa soo maray, sida dabka Doñana, oo ah masiibo bayoolaji oo dhameystiran. In cordoba heerkulka 44,5 digrii ayaa la duubay.
Bishii Luulyo, heerkulka ugu sarreeya waxaa laga diiwaangeliyey saldhig weyn, 46,9 digrii Córdoba, dhowr kormeerayaal ayaa jabiyay rikoorka roobka maalinlaha ah ee ka dhasha duufaannada la xiriira DANA, dhacdo soo noqnoqotay dhammaadkii Agoosto iyo in waxay sababtay hoos u dhac aad u daran heerkulka maalmaha ugu dambeeya ciidaha.
Bishii Agoosto heerkulka 29 digrii ayaa la arkay, oo ka sarreysa laba darajo oo tii sanadkii hore la diiwaan geliyey isla taariikhaha.
Abaartii ugu xumeyd taariikhda
Bishii Sebtembar waxay noqotay bishii ugu qallalanayd qarniga, taas oo ay kaydadyadu leeyihiin heerar xasaasi ah taas oo, qaar ka mid ah, dadka markii horaba ay biyuhu qariyeen tan iyo 60s ay bilaabeen inay soo baxaan.
Bishii Oktoobar waxaan marinnay Duufaanta Ophelia ee u dhow aagga Galicia taasoo sii xumeysey xaaladda dabka ku faafay Boortaqiiska iyo Asturias. In kabadan 35.000 hektar oo dhul ah ayaa la dajiyay, 70% aag aad u badan ayaa gubtay marka loo eego sanadkii ka horeeyay.
Ugu dambeyntiina, bilaha Nofeembar iyo Diseembar roobabku waxay bilaabeen inay da'aan, in kasta oo aysan ku filnayn inay ka soo kabtaan heerarka halista ah. Bishii Diseembar waxaa suurtagal ahayd in la arko duufaan magaceeda la yiraahdo, Ana, oo ay sameysay geeddi-socod ah cyclogenesis qarxa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Soo koobid Cimilada sanadka 2017
Sidee noqon doonaa jiilaalka iyo kirismaska ​​sanadkan?
Abaarta ayaa saameysay 120.000 oo caruur ah oo ku nool dalka Mauritania